Shacabka Baraawe oo bilaabay nolol cusub oo awal loo diidi jiray |
Shacabka Baraawe oo bilaabay nolol cusub oo awal loo diidi jiray
Tan iyo Markii Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta Magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeelaha Hoose waxaa Magaaladaasi laga soo sheegayaa isbadal dbinacyo badan leh.
Magaalada Baraawe ayaa aheed xaruntii ugu weeneed ay maamulayeen Al-Shabaab , waxaana magaaladaasi ka jiray maamul adag oo ka badalan kuwa ka jira Magaalooyinka iyo Deegaanada kale ay Al-Shabaab maamulayeen.
Maamulkii Al-Shabaab ee gacanta ku hayay Magaalada Baraawe ayaa dadka ku dhaqan Magaaladaasi ka mamnuucay arimo aad u badan ay kamid ahaayeen in ay qaataan Telfoonada Casriga ah iyo sidoo kale in aysan qaadan Karin Telfoon kaamirad leh.
Waxaa sidoo kale Al-Shabaab ka mamnuuceen shacabka ku dhaqan Magaalada Baraawe in guryaha ay ku xirtaan diishah si ay u fiirsadaan Telefishinada Caalamiga ah iyo waliba kuwa ku hadla afka Soomaaliga.
Amaradan ay Shabaab horey ugu soo rogeen Shacabka Magaalada Baraawe iyo kuwa kale oo badan ayaad moodaa in ay hada kasii yaraanayaan Magaalada , waxa ayna dadku bilaabeen in ay qaataan Telfoonada Casriga ah oo qaarkood guryhooda horey ugu sii qarsadeen , wax ay sidoo kale dadka bilaabeen in ay xirtaan Diishah si ay u daawadaan Telefishinada.
Magaalada Baraawe waxaa sidoo kale lagu arkayay maalmihii ugu dambeeyay dad si caadi ah jaadka iyo Sigaarka Magaaladaasi ugu isticmaalayay , waxaana Magaaladaasi iyo deegaanada kale ee Shabaab maamulaan mamnuuc ka ahaa Jaadka iyo Sigaarka in laga isticmaalo.
Waxaa hada xaalad isbadal ah gashay Magaalada Baraawe oo la aaminsanaa in ay kunoolaayeen inta badan Saraakiisha AL-Shabaab ee isugu jira kuwa Soomaali ah iyo kuwa kale oo ajaaniib ah , waxaana hada Magalaada si caadi ah gacanta ugu haya Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM.